यि ६ कारण, जसले प्रियंकालाई चर्चा सँगै बिवादमा पनि तानेका थिए ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > यि ६ कारण, जसले प्रियंकालाई चर्चा सँगै बिवादमा पनि तानेका थिए !
यि ६ कारण, जसले प्रियंकालाई चर्चा सँगै बिवादमा पनि तानेका थिए !
July 18, 2018 Bollywood
बलिउड देखी हलिउड सम्म आफ्नो अभिनय क्षमताको सम्राज्य बिस्तार गर्न सफल अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको आज जन्म दिन परेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । आजबाट प्रियंका ३६ वर्ष पुगेर ३७ मा लागेकी छिन् ।
यसै अवसरमा केही भारतीय संचार माध्यमहरुले प्रियंकाका टप ६ बिवाद विषयमा समाचार पनि प्रकाशीत गरेका छन् । हुन पनि प्रियंका कुनै न कुनै कारणले बेला बेलामा चर्चामा आईरहन्छिन् ।
एक पटक प्रियंकालाई बलिउडको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दाःबलिउड फिलिम्स् ईज अल अवाउट हिप्स एण्ड बुब्स, भनेर जवाफ दिएकी थिईन् । यो जवाफले उनलाई निकै बिवादमा ल्याएको थियो । अश्लिन जवाफ दिएको भन्दै चारै तिरबाट उनको खेदो खन्ने काम भएको थियो ।
त्यसै गरी प्रियंकाले एक पटक असम टुरिज्मको क्यालेन्डरको लागी फोटो सुट गराएकी थिईन् र त्यो फोटोले पनि उनलाई निकै बिवादमा तानेको थियो । उक्त फोटोले भारतीय राजनीतीलाई बेंगे गरेको भन्दै प्रियंकाको निकै आलोचना गरीएको थियो ।
त्यस्तै तेश्रो पटकको बिवाद भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग सम्बन्धीत रहेको छ । केही समय पहिले बर्लिनमा प्रियंका र मोदीको भेट भएको थियो । उक्त समय प्रियंकाले लगाएको छोटो कपडाको कारणले उनि ट्रोलको शिकार बने सँगै मिडियामा पनि निकै बिवादमा आएकी थिईन् ।
भोजपुरी फिल्मलाई अश्लीनताको आरोप लगाएको कारणले पनि प्रियंका बिवादमा परेकी थिईन् । भोजपुरी फिल्म बोल बम बम काँशी को डबिङ्ग गर्ने क्रममा उक्त फिल्ममा धेरै अश्लीन शब्द प्रयोग गरीएको आरोप प्रियंकाले निर्माण पक्षलाई लगाएकी थिईन् ।
त्यसो त प्रियंकाको नाम सेक्स ब्यावसाय सँग पनि जोडीएको थियो । बुम्बैमा उनले आफ्नो अफिस सँगैको खाली जग्गा एउटा ब्युटि एण्ड स्पा सेन्टरलाई भाडामा दिएकी छिन्, त्यो ब्युटी एण्ड स्पा सेन्टरले सेक्स ब्यावसाय संचानल गरेको भन्दै प्रियंकालाई बिवादमा ल्याईएको थियो ।
त्यसै गरी उनले हातमा मंगलसुत्र जस्तै लाग्ने ब्रास्लेट लगाएको फोटो सार्वजनीक भएपनि समाजीक संजालमा प्रियंकाले गुपचुप बिहे गरेको भन्ने जस्ता कुराहरुलाई विषेश महत्व दिएर भारतीय संचार माध्यमहरुले समाचार प्रकाशीत गरेका थिए र उनलाई बिवादमा पनि ल्याएका थिए ।